Xafladda qalin jabinta dufacadda 3aad ee Jaamacadda Jamhuuriya oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xafladda qalin jabinta dufacadda 3aad ee Jaamacadda Jamhuuriya oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO”
Munaasabad ballaaran oo loogu dabaal degayey qalin jabinta 308 arday oo dhamaysatay heerka koowaad tacliinta sare ee Jaamacadda Jamhuuriya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Xafladdan ayaa waxaa ka soo qeyb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas’uuliyiinta dowladda. gaar ahaan Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare, bahda Waxbarashada, waalidiinta ardayda iyo Mas’uuliyiinta Jaamacadda Jamhuuriya.
Agaasimaha Waaxda Tacliinta sare ee Wasaaradda Waxbarashada Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo munaasabadda ka qeyb galay ayaa u hambalyeeyey ardayda maanta ka qalin jabisay Jaamacadda Jamhuuriya.
Gudoomiyaha Jaamacadda Jamhuuriya Eng. Maxamuud Axmed Jimcaale ayaa dhankiisa dareenka hambalyada farxadda qalin badalasha ardayda la wadaagay, isagoo sheegay in ardayda qalin jabisay ay ka kooban yihiin 308 arday oo ka kala tirsan dhamaan kuliyadaha ugu waaweyn ee Jaamacadda Jamhuuriya.
Qaar kamid ah arday maanta xafladooda qalin jabinta loo dabaal dagayey ayaa dhankooda muujiyey dareenkooda farxadeed ee ku aadan in ay shahaadada heerka koowaad ee digriiga ka qaataan Jaamacadda Jamhuuriya, iyaga oo u mahadceliyey waalidiintooda iyo macalimiintoodii u soo dhabar adeegay muddadii ay Waxbarashada soo wadeen.
Waa dufacaddii saddeexaad ee ka qalin jabisa Jaamacadda Jamhuuriya of Science and Technology.
Xaaladda Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta Xabsiyada Libiya oo laga warbixiyay